Fizahan-tany Afovoany Atsinanana
Noforonina ho fialan-tsasatry ny torapasika fotsiny ny Isiraely , satria nandamina ny morontsirakany ny faritany. Ny tapany andrefana ao amin'ny firenena dia sasatry ny Ranomasina Mediterane, ny morontsiraka atsimo dia manamorona ny moron-dranomasina Mena, any amin'ny ilany atsinanana ny Ranomasina Mato malaza. Ny kely any amin'ny faritra avaratra-atsinanana dia misy toeram-pialan-tsasatra eny amoron- dranomasin'ny Ranomasin'i Galilia .
Ny tora-pasika tsara indrindra any Israely
Ao amin'ny Isiraely, manodidina ny 140 tora-pasika, ny ankamaroan'izy ireo dia eo amin'ny morontsirak'i Mediterane, ary kely indrindra ny tora-pasika eo amoron'ny Ranomasina Mena. Anisan'ireo tora-pasika tsara indrindra any Israely ianao dia afaka mitanisa ireto manaraka ireto:
Ny toerana tena tian'ny mponina sy ny mpizaha tany dia ny tanànan'i Ein Bokek , izay miorina eo amoron-dranomasina maty. Eto dia misy iray amin'ireo tora-pasik'i Israely tsara indrindra, izay atolotry ny hotely tsara tarehy, ary koa ireo toeram-pitsaboana. Ireo mpizahatany manerana an'izao tontolo izao dia mandeha any amin'ny Ranomasina Maty mba ho sitrana amin'ny alahelony.
Tora-pasika malaza any Israely no mipetraka any amin'ny morontsirak'i Mediterane, ao amin'ny renivohitr'i Israely - ny torapasin'i Tel Aviv . Izy ireo dia noforonina tamin'ny fomba artificiel, tany akaikin'ny trano fandraisam-bahiny trano efa niorina. Miparitaka amin'ny fasika fotsy fotsy ny zotra, ary manara-maso ny fahadiovan'ny moron-dranomasina.
Ao amin'ny faritra ambanivohitry ny renivohitr'i Israely no misy ny tora-pasika Bat Yam . Miorina ao anaty lagon-drano voajanahary izy io, izay ahafahana miaro azy amin'ny onjam-be. Ny tora-pasik'i Bat Yam dia miparitaka amin'ny fasika fotsy, ary manerana ny moron-dranomasina dia misy fiaran-dalamby, izay mahatonga azy ho an'ny mpizaha tany.
Ao Isiraely dia misy tanàna lehibe antsoina hoe Netanya , izay mihoatra ny Tel Aviv amin'ny fipoahan'ny mpizaha tany. Izy io dia toeram-ponenana any amin'ny morontsirak'i Mediterane, any avaratry ny renivohitr'i Israely. Eto dia misy ny làlana afovoan'i Sironit , izay tsy ananana afa-tsy ny fitsaharana amin'ny torapasika, fa koa noforonina ho an'ny fialamboly hafa. Ny fotoana tsara indrindra hanaovana fialan-tsasatra any amin'iny faritra iny ao amin'ny firenena dia vanim-potoana mafana - hatramin'ny fiandohan'ny fahavaratra ka hatramin'ny fararano.
Na kely aza ny morontsiraky ny Ranomasina Mena any Isiraely noho 14 kilaometatra, misy toerana malaza eto - Eilat . Afaka mankafy fialan-tsasatry ny torapasika mandritra ny taona ianao. Ny moron-dranomasina dia madio sy voatazona tsara, na izany aza, ireo trano fandraisam-bahiny dia manara-maso ny fahatsaran'ny taniny. Ankoatr'izany, ny moron-dranomasina dia malaza amin'ny karazan-karazana sy trondro hafakely izay miaina amin'ireny faritra ireny.
Ho an'ny mpizaha tany tia tara-pahazavana, dia misy toerana any Israely izay tsy misy fifandraisana goavana eo amin'ny hotely sy orinasa hafa. Iray amin'ireo sarisarin'ny toeram-pijerem-pokonolona ao Israely ny moron'i Palmachim . Mipetraka any atsimon'i Tel Aviv izy, mangina loatra ary tsy dia feno loatra. Io no iray amin'ireo morontsiraka any amin'ny Ranomasina Mediterane, izay onenan'ny dongom-pasika ary afaka mahafantatra tsara ny tontolo manodidina azy.
Any amin'ny torapasika hafa any amin'ny Ranomasina Mediterane dia misy faritra maro ho an'ny mpikaroka. Isaorana ireo mpandala ny tontolo iainana ao Isiraely, voaro ny toerana toy izany. Any amoron'ny Ranomasina Maty , dia mitahiry tora-pasika koa ny moron-dranomasin'i Neve Midbar , tora-pasik'i Kalia , amoron-dranomasin'i Siesta , tora-pasik'i Ein Gedi . Na izany aza, ny fitsangatsanganan-dranomandry mafana dia manomboka mivoatra any amin'ireny faritra ireny, saingy mbola voatahiry eto ireo toerana mitokana. Toerana iray tena tiany ho an'ny mpikaroka ny Bay Eilat, izay toerana handrafetana tranolay, akaiky ny sisintany miaraka amin'i Jordania na Ejipta.
Ireo zoro any Israely any amin'ny Ranomasina Mediterane
Ny sisin-tany andrefana ao amin'ny firenena dia eo amin'ny morontsiraka lava-dranomasin'ny Ranomasina Mediterane, izay manodidina ny 196 km. Ao amin'ny firenena dia tsy misy zavatra toy ny tora-pasika tsy miankina, ka maro ny mpizahatany no manontany: inona moa ny torapasika any Israely? Misy tora-bahoaka sy ariary, ary ny fidiram-bola avy any an-tsena dia mandeha any amin'ny tahirim-bola mba hanamboarana ny morontsiraka.
Ny toerana fisakafoanana dia ny Tel Aviv , Akko , Netanya , Haifa , Ashdod , Herzliya ary Ashkelon :
Tsy misy velively ny tebiteby ao Tel Aviv , satria eo akaikin'ny metropole lehibe izy ireo. Ny olona ao an-toerana dia ampiasaina handany ny ankamaroan'ny fotoan-dry zareo eto, manao fitsangatsanganana eny an-dalambe na manao fitetezam-pandeha sy bisikileta.
Ny moron-dranomasin'i Akko dia miorina ao amin'ny faritany tranainy iray, izay ahitana ny moron-koditra, tsy misy afa-tsy amin'ny fasika volamena, ihany koa ny moron-dranomasina. Eto dia misy torapasika roa izay malaza, Tmarin sy Argaman io tora-pasika io . Ny tora-pasika Tmarin dia an'ny hotely iray izay mifanakaiky sy mipetraka miaraka amin'ny masoandro. Ny Argaman dia saran-dalana amin'ny mpizahatany, manana orana misokatra ary fikarakarana fitaovana an-dranomasina.
Ny tora-pasik'i Netanya dia voahodidin'ny faritra maitso ao an-tanàna, saingy madio ny tora-pasika. Somary mangina kokoa noho ny eny amoron-dranomasin'ny renivohitra Isiraeliana, saingy misy fitaovana ilaina rehetra amin'ny fialan-tsasatry ny torapasika. Hatramin'ny nipetrahan'ny tanànan'i Netanya, dia tsy maintsy nidina ny tohatra ianao.
Ny moron-dranomasin'i Haifa dia hita any amin'ny faritra an-tanànan'i Bat-Galim. Ny Beach Hot a-Shaket noforonina ho an'ireo mpizaha fivavahana, eto dia ny fitsipiky ny Jodaisma dia manana zo hilomano avokoa: lehilahy sy vehivavy. Ny tora-pasika faharoa any Bat-Galim dia faritra iray ho an'ny besinimaro, misy ranon-dranomasina, satria misy tetezana natsangana. Toerana mahafinaritra hialana amin'ny ankizy.
Iray amin'ireo tora-pasika mahafinaritra indrindra any Israely ny Bar Kochba , izay any amin'ny faritr'i Askelon. Mba hahatongavana any amoron-tsiraka, mila mandingana ny dingana miloko manga avy amin'ny vonin'ny voninkazo. Ny lava-bato dia voahodidin'ny alim-bary izay miaro amin'ny onja lehibe. Ny renirano dia miseho tsy tapaka amin'ny tantara fahiny, satria talohan'izany dia nisy fiarovana kananita. Azonao atao ny mahita vola madinika na sombin-javatra ara-tantara.
Ranomasina any amin'ny Ranomasina Maty any Israely
Any amin'ny morontsiraky ny Ranomasina Maty dia tsara kokoa ny miala sasatra any amin'ny faritra atsimo, izay misy ny toerana malaza ao Ein Bokek . Raha ny marina, eto ny tora-pasika be mpampiasa indrindra, ary any amin'ny toerana hafa - tete-hidy na tora-pasika misy vato. Ny moron-dranom-bahoaka lehibe indrindra dia eo akaikin'ny hotely Hotel Hotel Dead Sea, ny fidirana ao dia malalaka. Ny tora-pasika rehetra ao amin'ilay toeram-ponenan'ny Ein Bokek dia manana efitra fisakafoanana sy orana. Eto ihany koa misy faritra - solarioma, izay azonao alaina ary mipetrapetraka "topless".
Any amin'ny morontsiraka avaratra amin'ny Ranomasina Maty no misy ny torapasika Kalia . Tsara ny fitaovana, misy toeram-pisakafoanana, efitra fandraisam-bahiny, trano fisakafoanana sy fivarotana. Misy ny fotaka malaza ao amin'ny Ranomasina Maty. Ao amin'ny faritra avaratra ihany koa ny tora-pasika Bianchini , izay tsy ampy fitaovana ho an'ny fialan-tsasatry ny torapasika, misy lakandrano sy dipoavatra. Iray amin'ireo tora-pasika malaza indrindra amin'ny Ranomasina Maty ny torapasik'i Neve Midbar , misy dobo filomanosana ary eo amoron-dranomasina dia misy fotaka ao amin'ny Ranomasina Maty. Ny fidirana amin'io tora-pasika io dia aloa, na dia tian'ny tanora aza ity morontsiraka ity.
Ireo zoro ao Isiraely eo amin'ny Ranomasina Mena
Ny Ranomasina Mena dia malaza amin'ny toerana sy ny torapasika ao Eilat . Ao an-tanàna, maharitra mandritra ny taona ny fotoan'ny tora-pasika, ny moron-dranomasina dia eo amin'ny morontsiraka 14 kilaometatra. Ny ankamaroan'ny mpizahatany dia miorina any amin'ny faritra avaratra manakaiky ny morontsirak'i Jordania, izay misy ny tora-pasika amin'ny fasika tsara. Eto no toerana tsara indrindra hilomano, satria tsy misy vatohara any ambany. Ny tora-pasika dia manana elo, satroka masoandro, orona ary na tilikambo an-trano mihitsy aza. Misy ihany koa toerana hanaovana hetsika sy rano.
Ny tora-pasika malaza indrindra amin'ny mponina ao an-toerana dia Mifrat Hashamesh . Ity tora-pasika ity dia saika tsy manana landscaped, misy fidiram-bola samihafa ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy. Ny Beach Dolphinarium ao Eilat dia manana sandy sandany ary manana elo kely. Ny singa lehibe indrindra dia ny ahafahanao mijery ny vorombola sy ny feso fambolena. Trano maro eto amin'ity faritra ity no mivoaka any an-dranomasina ary mametraka ny torapasik'izy ireo any. Ho an'ireo tia ny fiantefan'ny scuba, afaka mankany amin'ny morontsirak'i coral ianao, izay tsy misy amoron-dranomasina tsy misy fitaovana fitaratra, fa mety misy ireo izay manana fampiononana kely.
Fialantsasatra any UAE
Ahoana no fomba fitafy any Arabia Saodita ho an'ny mpizaha tany?
Fjords any Oman
Mila visa ho an'i Israely ve aho?
Ny sarin'i Margo Robbie, izay tsy nandray ny Oscar 2018, dia lasa iray amin'ny tsara indrindra
Sakafo ho an'ny famokarana indostrialy
Akanjo hariva ho an'ny vehivavy bevohoka
Teknolojian'ny embroidery miaraka amin'ny perla
Niala tsiny i Keith Harington satria tsy maintsy mandainga momba ny ho avin'i John Snow
13 herinandro ny bevohoka - inona no mitranga?
Antony mahatonga ny fahaketrahana
Chandelier ho an'ny lakozia amin'ny tanany manokana
Shake, Jenner, Aldridge, Hadid ary ny hafa noho ny fandotoana mahazatra an'i Diana von Furstenberg
Rahoviana vao bevohoka?
Gas SPA - sekreteran'ny carboxytherapy
Ny fahanteran'ny vatan'olombelona
Suit Koshchei tsy mety maty tamin'ny tanany